Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Deepin OS 15.6 | Laga soo bilaabo Linux
Kadib markuu saxay rakibidda Deepin 15.6 Waxaa jira khaladaad qaarkood oo ku dhacay wax kabadan hal xalkooduna runtii waa wax fudud. Taas ka sokow, waxay u badan tahay inaad u baahan tahay qaabab dheeri ah oo dheeri ah.
Taasi waa sababta waxaan kuu soo gudbineynaa waxyaabo fudud oo aad sameyn karto kadib rakibida Deepin OS kumbuyuutarradooda.
1 Ku cusboonaysii baakadaha iyo codsiyada qaabkoodii ugu dambeeyay ee xasilloon.
2 Xalka khaladaadka GPG: http://repository.spotify.com
3 Xalka khaladka [drm: drm_atomic_helper_commit_cleanup_done]
4 Codsiyada Lagu Taliyay
Ku cusboonaysii baakadaha iyo codsiyada qaabkoodii ugu dambeeyay ee xasilloon.
Inkasta oo nooca 15.6 ee Deepin uu dhowaan yahay, lxirmooyinka iyo codsiyada waxay u egtahay in la cusbooneysiinayo markaa iyada oo aan loo eegin haddii aan rakibno, waa mid aad u muhiim ah.
Waa inaan furnaa terminal oo aan ku qornaa amarradan soo socda:
Horeba tan ayaa loo sameeyay waxaan cusbooneysiin doonnaa xirmooyinka. Waxa kale oo jirta suurtagal weyn oo ah in markii aad sidan sameyso aad heli doonto qaladka soo socda.
Xalka khaladaadka GPG: http://repository.spotify.com
EKhaladkan waa mid caadi ah inaad ka baxdo sababta oo ah fure faneedka ka yimid keydka Spotify si guul leh looma keenin.
Arrintan awgeed waxaan heysanaa laba xal oo macquul ah mid ka mid ah waa in dib loo soo dhoofiyo furaha dadweynaha tan kalena ay tahay in la tirtiro keydka.
Asal ahaan tan labaad ayaa ah tan ugu fiican, tan iyo maanta macmiilka Spotify ee Linux waxaa laga heli karaa inta badan qaybinta Linux.
Tani horeyba waxay ugu jirtaa doorashada qof walbana waxaan wadaagnaa labada habab.
Habka ugu horreeya waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la furo terminal oo la fuliyo:
Waxaan dib-u-soo-dejinnay furihii dadweynaha:
Y waxaan cusbooneysiineynaa:
Qaabka labaad ayaa ah tirtirka bakhaarka, tan waxaan u furaynaa terminal oo aan u fulinnaa:
Xalka khaladka [drm: drm_atomic_helper_commit_cleanup_done]
Ciladani ma ahan mid caan ah oo badanaa waxay u muuqataa in yar, sababta ay badanaa u dhacdo si fiican looma soo kicin karo, kaliya kombiyuutarada qaar ayaa dhibaatooyin ka qaba qaabeynta bilowga.
Si loo xaliyo waa inaanu furnaa terminal oo aan fulino:
Aynu raadino khadka soo socda
Y waan ku dari doonaa buufin aamusnaan xiga fiidiyow = SVIDEO-1: d
Hadhay sida soo socota:
Waxaan keydineynaa isbeddelada Ctrl + o oo waxaan uga baxnaa nano Ctrl + x.
Tallaabada xigta waa in la cusbooneysiiyo isbeddelada 'Grub' iyadoo:
Oo waxaan dib ugu bilaabi karnaa kumbuyuutarka:
Codsiyada Lagu Taliyay
Deepin asal ahaan waxay leedahay tiro badan oo codsiyo aad u wanaagsan sidaa darteed uma baahna waxyaabo badan.
In kastoo maahan isticmaaleyaasha oo dhami inay sida caadiga ah ku raacsan yihiin barnaamijka naloo fidiyo taasi waa sababta aan u dooran karno inaan ku rakibno beddelaadyo kale iyo kuwo dheeri ah.
Codsiga ugu horreeya ee aan dooran karno inaan beddelno waa shabakadda shabakadda, kaas oo dal ahaan noo siiya Chrome.
Shaki kuma jiro Chrome waa biraawsar shabakadeed aad u fiican, aad ufiican oo aanan wax badan ka dalban karin, laakiin waxay leedahay dhibic aan fiicnayn waana cunista xad dhaafka ah ee RAM.
Waan dooran karnaa mid weyn oo ka mid ah tartamayaasheeda waa Firefox, oo aan ku rakibi karno amarka soo socda:
Browser kale oo noqon kara bedel fiican labadan hadaadan ka helin waa Opera, Kaas oo laga eego dhanka adeegaha waa biraawsar qurxoon oo wanaagsan oo hirgaliyay astaamo aad u wanaagsan bilihii la soo dhaafay.
Ku rakibidaada nagu filan oo aan u tagno boggeeda rasmiga ah oo soo dejiso xirmada deynta oo aan mar dambe rakibi karno adigoo laba jeer gujinaya.
Codsi kale oo aan ku rakibi karno Deepin 15.6 waa Kodi. Barnaamijkan xarunta madadaalada ayaa ah mid quruxsan oo kaa caawin kara inaad ku raaxaysato waxyaabaha aad ka kooban tahay ee qaababka badan leh qaab quruxsan.
Si aad u rakibto, kaliya ku qor:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Deepin OS 15.6
OpenMandriva Lx 3 waxay heleysaa cusbooneysiin weyn kahor intaanay soosocoto midkeeda weyn